Izabelle Hundrev's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone
Zvinyorwa na Izabelle Hundrev
Izabelle Hundrev ndeyeChicago-yakavakirwa zvemukati munyori kuDirective. Anoda kuverenga nekunyora kweupenyu hwese, akapedza degree nehunyanzvi kubva kuYunivhesiti yeMissouri muna 2017. Mushure mekupedza kudzidza, Izabelle akatanga basa mukutengesa kweB2B uko kwaakasarudzika mukusimudzira bhizinesi. Mushure memazana mashanu emakore mukutengesa, akadzokera kumidzi yake yekunyora uye akaita shanduko yebasa mukushambadzira zvemukati.
NeChishanu, Gunyana 11, 2020 NeChishanu, Gunyana 11, 2020 Izabelle Hundrev
Muna 2011, muzvinabhizimusi Marc Andreessen ane mukurumbira akanyora, software iri kudya nyika. Munzira dzakawanda, Andreessen aive akarurama. Funga nezve mangani ma software zvishandiso zvaunoshandisa zuva nezuva. Imwe smartphone inogona kuva nemazana ekushandisa software pairi. Uye icho chingori chinhu chidiki chidiki muhomwe yako. Zvino, ngatishandise iyo imwecheteyo pfungwa kune bhizinesi renyika. Imwe kambani inogona kushandisa mazana, kana zvisiri zviuru, zve software mhinduro. Kubva pamari kusvika kuvanhu